WAXAAN KORAAN GABBALDAYAHA BEERTAADA: SHURUUCDA BEERAHA IYO DARYEELKA - SOOSAARKA DALAGGA
Helianthum (Giriigga iyo hunqaacada - ubax), Ruush - gabbaldayaha, waa dhir aad u qurux badan oo qurux badan oo casaan leh, casaan, casaan ama ubax caddaan ah, taas oo ay ugu mahadcelinayso unpretentiousness iyo kobaca degdegga ah, waxay awoodaan inay qurxiyaan kuleyl xagaaga . Waa buro kobcin ah ilaa 30 cm oo dheer oo leh caleemo qoyan oo cagaaran ama madow ah.
Goobidda iyo dhalmo ee helianthemum
Taranta qorraxdu waxay ka dhacdaa saddex siyood: abuurka, dhejinta, gooynta.
Beeraha Beeraha loogu talagalay geedo
Waxaa fiican in la bilaabo abuurka miraha gabbaldayaha loogu talagalay geedo horaantii horaantii Maarso, tan iyo geedi socodka biqilka ee helianthemum waa mid dheer (mararka qaarkood ilaa afar toddobaad). Seeds ayaa kala firdhiyey ciidda dabacsan, ka dibna waxaa lagu daboolay lakabka khafiifka ah ee cammaanka ama vermiculite. Jeexitaanku waa inuu ku dhacaa meel cad oo heerkul ah 18-24 ° C.
Marka sprouts ay muuqdaan, waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo qaboojiye (3-5 ° C) nidaam heerkulka oo leh farqiga u muuqda. Xaaladahaas oo kale, geedo waxay dareemaan raaxo.
Beerto in dhul furan
Waxay macno u tahay in lagu beero gabbaldayaha berrinka bannaan bilowga Maajo isla markiiba isla markiiba meesha loogu talagalay helianthemum.
Waa muhiim! Sunflower waa mid aad u adag in lagu dulqaado noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'transplants'.
Magaca magaca geedka ayaa go'aaminaya booska beeritaanka: Sunflower wuxuu jecel yahay kulayl badan iyo qoraxda. Carrabku waxay doorbidaan alkaliin ama dhexdhexaad ah, oo leh heer sare oo ah ciid ama dhagax la jajabiyey, taas oo bixisa qoyaan ku filan. Helianthum sidoo kale waxay sii kordhaysaa digaam, laakiin kiiskan waxaa fiican in lagu daro burka dolomite ee ciidda horay loo sii wado.
Dhaafida adoo isticmaalaya gooynta sare
Jarida ayaa si sax ah loo tixgeliyaa habka ugu caansan ee dhalmada. Si arrintan loo sameeyo, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo caleemaha aan lahayn ubax, qiyaastii 10 cm oo dherer ah, ku rid weel iyaga oo leh peat ama ciid iyo dabooli filin si loo abuuro saameynta dhirta lagu koriyo. Soo bixitaanka caleemaha cusub macnaheedu waa in dhirta ay bilowday oo lagu beeray dhul furan.
Qaar ka mid ah Talooyinka Daryeelka Sunflower
Sunflower guud ahaan waa wax aan la qabin, daryeelkuna ma aha mid la xiriira dhibaatooyin gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, si ay geedaha sanado badan si ay u farxaan isha leh ubax midabka qoraxda, waxay u baahan tahay badan oo qorraxda. Geedku wuxuu jecel yahay ciidda qalalan leh dheecaan wanaagsan, waraabinta qorraxdu waa la samayn karaa oo keliya xilliyada abaarta daran.
Wixii ubax wanaagsan, caleemaha la gooyey waxay u baahan yihiin in la gooyo qiyaastii saddexaad.
Waa muhiim! Ma aha lagama maarmaan in la quudiyo helianthemum, kiiskan geedka wuxuu ku socdaa "caleen", iyo ubax, liddi ku ah, daciif ah.
Si aad u diyaariso dhirta xilliga jiilaalka waxaa lagu daboolay agrofibre, hay ama caws qallalan. Sunflower leh caleemo lacag ah waxay u baahan tahay si taxadar leh.
Ma taqaanaa? Helianthumes leh siyaalo kala duwan oo ubax ah ayaa la koray si kala duwan: dhirta leh ubax casaan barafoobaya jiilaalka sidaas darteed waxaa loo tixgeliyaa sanadlaha, halka ubaxyo huruud ah iyo orange ah oo caan ku ah sunflower-ka sii adkaysta oo aan u dulqaadan karin jiilaalka adag.
Wada-hawlgalayaasha iyo isticmaalaan naqshad beerta
Sunflower waxaa badanaa loo isticmaalaa walxo isku dhafan si ay u daboosho boogaha lafdhabarta ama dhoobada carrada. Waxay si fiican u socotaa ubax buluug ah sida gambaleelka, sage, matoorka, Veronica, maro qurxin.
Cows-ka orodyahanadu sidoo kale waxay u muuqdaan kuwo wanaagsan oo ku xigga helianthemum. Waxay noqon kartaa noocyo kala duwan oo ah fescue ama cawska baal.
Ubax ee gabbaldayaha ka soo horjeeda dabiicada dhirta cagaaran ee cagaaran, tusaale ahaan juniper, waxay u egtahay mid gaar ah.
Go'aanka gabbaldayaha ayaa ka baxaya guga oo si weyn u xoojinaya sharafnimada tulooyinka, daffodils iyo isku-dhafka.
Jacaylka Sunflower wuxuu isticmaalaa naqshadeeyayaasha marka la sameynayo xariiqa alpine: Geedi ma aha oo kaliya u dulqaadanaysa abaarta, laakiin sidoo kale si wanaagsan u koraaya dhagaxyada iyo dushooda, sidaas darteed, isticmaalka kartida leh ee gabbaldayaha ee naqshad beerta waxay keenaysaa natiijo aan la sharxi karin. Helianthum waxaa loo isticmaalaa in lagu beero waddooyinka beerta xudduudaha, iyo sidoo kale weelasha, balakoonnada, qurxinta iyo meelaha banaan.
Ma taqaanaa? Waxaa jira laba nooc oo ubax ah helidada - helitaanka iyo gaajada. Bloomkii ugu horeeyay oo kaliya hal maalin (laga bilaabo waaberiga ilaa duhurkii), laakiin tan iyo geedka ayaa si joogto ah u soo saara ubaxyo cusub iyo kuwo cusub, waxay u muuqataa in ubaxa aan la kala gooyin.
The cadowga ugu weyn ee gabbaldayaha - xad-dhaaf ah qoyaan. Ma ahan oo keliya qulqulka, laakiin sidoo kale ku saabsan baraf barafka, taas oo ka dhalatey taas oo carrada ku dheggan biyo, iyo warshadu waxay bilaabmaysaa miraha oo qudhuntii. Aphids iyo thrips ayaa si gaar ah halis u ah cayayaanka qorraxda, iyo sunta cayayaanka noolaha waa in loo isticmaalo haddii ay dhacdo jirro. Cudurrada "powdery" ayaa laga yaabaa inay badanaa la xidhiidha biyaha.